I-The bothy, Indlu yobuciko endaweni ethandekayo. - I-Airbnb
I-The bothy, Indlu yobuciko endaweni ethandekayo.
Bothel Wigton , Cumbria, i-United Kingdom
I-Bothy idalwe yithi ngothando, sisebenzisa izingodo zendawo, izinto ezigaywe kabusha kanye nefenisha yethu eyenziwe ngesandla. Umphumela uba indawo enhle eyingqayizivele lapho ungakhululeka khona futhi ukhululeke.
Ngethemba ukuthi uzowujabulela umsebenzi wobuciko kanye nobuciko ngendlela esikujabulele ngayo ukuwenza.
I-Bothy inakho konke okudingayo ngokuhlala kwakho, okuhlanganisa okokulala namathawula njll.
Isitofu esibasayo, i-TV, iDVD kanye nesidlali se-CD zinikeziwe futhi kunenqwaba yezincwadi, ama-DVD kanye nemidlalo ongayisebenzisa.
Ishisiswe ngubhayela we-woodchip omaphakathi, nogesi okhiqizwe eturbine encane yomoya kanye namaphaneli e-photo voltaic. Iyindawo ekahle yasemaphandleni lapho ungaphumuza khona futhi uphumule, kuyilapho unokufinyelela okuhle emadolobheni nasezindaweni eziheha izivakashi.
I-Lake District National Park iyindawo emangalisayo ongayivakashela nganoma yisiphi isikhathi sonyaka ngezintaba zayo ezinhle, amachibi kanye nezakhiwo zayo. I-Bothy isendaweni enhle yasemakhaya edinga uhambo lwemoto ukuyolanda izimpahla.
Hlola ezinye izinketho ezise- Bothel Wigton namaphethelo